WHO က တရုတ်နိုင်ငံထုတ် Sinovac ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးအား အရေးပေါ်သုံးစွဲရန် တရားဝင်ခွင့်ပြု - Xinhua News Agency
ဂျီနီဗာ ၊ ဇွန် ၂ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့(WHO)က အရေးပေါ်သုံးစွဲရန်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံဇီဝဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ Sinovac Biotech မှ ထုတ်လုပ်သော CoronaVac ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးကို ဇွန် ၁ ရက်တွင် တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ပေးလိုက်ကြောင်း သိရသည်။ယင်းကာကွယ်ဆေးကို အသက် ၁၈ နှစ် နှင့်အထက် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအနေဖြင့် အချိန် နှစ်ပတ် မှ လေးပတ်ခြား၍ ဆေးနှစ်ကြိမ်ထိုးနှံရန် WHO ကထောက်ခံပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ လေ့လာစမ်းစစ်မှုများအရ Sinovac ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူသူများတွင် လက္ခဏာပြရောဂါကူးစက်ခံရမှုအတွက် ၅၁ ရာခိုင်နှုန်း နှင့် COVID-19 ရောဂါပြင်းထန်စွာခံစားရခြင်း နှင့် ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသရခြင်းမှ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း အထိ ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်ကို အချက်အလက်ရလဒ်များတွင် ဖော်ပြနေကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအားစနစ်ဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာအကြံပေးအုပ်စု (SAGE) ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့ ဇီဝဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Sinovac Biotech မှ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးများ ထုတ်ပိုးနေသည်ကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့ရှိ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေးစင်တာတစ်ခုတွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ် ၃၁ ရက်က တရုတ်နိုင်ငံထုတ် Sinovac ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေးရန် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ပြင်ဆင်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
သို့သော်လည်း အသက် ၆၀ ကျော် အရွယ်လူနာအနည်းအကျဉ်းသာ ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသမှုခံယူရကြောင်း နှင့် Sinovac ကာကွယ်ဆေး၏ အာနိသင်သည် အဆိုပါအသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားအုပ်စုတွင် ခန့်မှန်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်း WHO က ပြောကြားခဲ့ပြီး
“ ကာကွယ်ဆေးဟာ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူနဲ့ငယ်ရွယ်သူတွေကြားမှာ မတူခြားနားတဲ့ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ယုံကြည်လောက်တဲ့ အကြောင်းပြချက်မရှိသေးပါဘူး” ဟု ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ကာကွယ်ဆေးအတွက် အသက်ရွယ်ကြီးရင့်သူများအား ကန့်သတ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန် WHO က ထောက်ခံထားခြင်းမရှိကြောင်း ဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်။အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော နိုင်ငံများစွာ၌ ကောက်ယူထားသော အချက်အလက်များ နှင့် ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားစနစ် အားပေးမှု အချက်အလက်အရ ယင်းကာကွယ်ဆေးသည် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူများပါ ထိရောက်သောကာကွယ်မှုပေးနိုင်သည်ကို အကြံပြုထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ယခင်က ခွင့်ပြုထားသော ကာကွယ်ဆေးများအရ WHO သည် Sinovac ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူများအား ကျွမ်းကျင်သူများက လေ့လာစောင့်ကြည့်ရာတွင် ဘေးကင်းလုံခြုံမှု နှင့် ထိရောက်မှု ရှိသည်ကိုတွေ့ရပြီး နိုင်ငံအားလုံးတွင် ပိုမိုထိုးနှံသွားကြရန် ထောက်ခံထားကြောင်း သိရသည်။
“ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကာကွယ်ဆေး မညီမျှမှု ကြီးကြီးမားမား ဖြစ်ပေါ်နေလို့ ကာကွယ်ဆေးအမျိုးမျိုးကတော့ အများကြီးလိုအပ်နေပါတယ် ” ဟု ကျန်းမာရေးထုတ်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ WHO လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mariangela Simao ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
“ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သူတွေကို COVAX အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ကြဖို့ ကျွန်မတို့တိုက်တွန်းပါတယ်၊ ဘယ်လိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတဲ့ သူတို့အသိတွေ ၊ အချက်အလက်တွေကို ဝေမျှဖို့ နဲ့ ဒီကပ်ရောဂါကြီးကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ပါ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
Sinovac ကာကွယ်ဆေးသည် လွန်ခဲ့လအစောပိုင်းက သုံးစွဲခွင့်ရရှိခဲ့သည့် Sinopharm ကာကွယ်ဆေးပြီးလျှင် WHO မှ အရေးပေါ်သုံးစွဲရန် ခွင့်ပြုချက်ရရှိသည့် တရုတ်နိုင်ငံထုတ် ဒုတိယမြောက် ကာကွယ်ဆေး တစ်မျိုးဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံထုတ် ကာကွယ်ဆေး နှစ်မျိုးအပြင် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည် Pfizer/BioNTech ကာကွယ်ဆေး ၊ AstraZeneca/Oxford ပုံစံနှစ်မျိုးဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသော ကာကွယ်ဆေး ၊ Janssen ကာကွယ်ဆေး နှင့် Moderna ကာကွယ်ဆေးများကို အရေးပေါ်သုံးစွဲရန် ခွင့်ပြုချက်ပေးထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
WHO, #China, #vaccine, #sinovac, #emergency ,#xinhua, #xinhuamyanmar, #ဆင်ဟွာ
GENEVA, June 1 (Xinhua) — The World Health Organization (WHO) validated on Tuesday the CoronaVac COVID-19 vaccine developed by Chinese pharmaceutical company Sinovac Biotech for emergency use.
WHO recommends the vaccine for use in people 18 years and older, inatwo-dose schedule withaspacing of two to four weeks, according toastatement.
The efficacy results showed that the Sinovac vaccine prevented symptomatic disease in 51 percent of those vaccinated, and prevented severe COVID-19 and hospitalization in 100 percent of the studied population, according to the WHO’s Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE).
However, as few people over 60 years old were enrolled in clinical trials, the WHO said the Sinovac vaccine’s efficacy could not be estimated in this age group.
“There is no reason to believe that the vaccine hasadifferent safety profile in older and younger populations,” the statement said, adding that the WHO is not recommending an upper age limit for the vaccine, because data collected in multiple countries and supportive immunogenicity data suggest the vaccine is likely to haveaprotective effect in older persons.
“The world desperately needs multiple COVID-19 vaccines to address the huge access inequity across the globe,” said Mariangela Simao, WHO assistant-director general for Access to Health Products, in the statement. “We urge manufacturers to participate in the COVAX Facility, share their know-how and data and contribute to bringing the pandemic under control.”
The Sinovac vaccine is the second one from China that has been included in WHO Emergency Use Listing, following the Sinopharm vaccine which was validated earlier last month.
Apart from the two Chinese vaccines, the WHO has previously listed the COVID-19 vaccine developed by Pfizer/BioNTech, two versions of AstraZeneca/Oxford vaccine, the Janssen vaccine, and the Moderna vaccine for emergency use.